Qubsuma Koo 20፡ ''Osoon tasa ka'ee bakka tokko deemuu danda'ee, kanin deemu Harari'' - BBC News Afaan Oromoo
Qubsuma Koo 20፡ ''Osoon tasa ka'ee bakka tokko deemuu danda'ee, kanin deemu Harari''
31 Amajjii 2018
Image copyright Michael Bahiru
Goodayyaa suuraa Mikaa'eel Baahiruu barumsaaf gara Amistardaam deeme
Mikaa'eel Baahiruun jedhama. Dhaladhee kanan guddadhe Magaalaa Harariitti. Garuu barnoota olaanaa kanan hordofe Magaalaa Finfinneetti. Amma kanan jiraadhu ammoo Hoolaandi Magaalaa Amistardaam keessa.
Gara biyya kanaa kanan dhufe ergan biyyatti oggumaa waldhaansaatiin eebbifameen booda ture. Fedhiin barnoota kiyya itti fufuuf qabuun kan ka'e, yunivarsitoota adda addaatti iyyadheen ture. Dhumarattis yunivarsitiin magaalaa ani amma keessatti argamu tokko waan na simateef, digrii kiyya lammaaffaa hojjachuufan as dhufe.
Dhimmoota Amistardaam magaalawwan Itoophiyaatti keessa jiraadhee adda taasisan keessaa tokko, qorra isheeti. Kana malees Hoolaandi baayyee lafa diriirtu waan taateef akka Itoophiyaa carraan tulluuwwan arguu baayyee xiqqaadha.
Ergan gara biyya kana dhufee baayyinaan kanan sooradhuufi kanan jaaladhuuf nyaata qurxummii saalman jedhamu mi'eessituun qophaa'uudha. Mana kootiin ala bahee nyaachuu waanan hin jaalanneef, yeroo hedduu ofii kiyyaan bilcheessee sooradha. Kanaafuu nyaata qurxummii irraa hojjatamun filadha.
Ergan biyyaa bahee yeroo gabaabaa ta'ulleen yoon waa'ee biyyaa yaadu kan caalaa natti dhufu ummata biyya kiyyaati.
Biyyaan ala namoota aadaa biraa qaban waliin haala salphaan walii galuun rakkisaa waan ta'eef, namootan beekuun yaada.
Namoonni ani jireenya koo keessatti beeku hunduu kan jiran biyya keessa. Kanaafuu maatii kiyyaa qabee yeroo hunda namootan yaada.
Mana kootii karaa foddaatiin yoon gara alaa ilaalu keessattuu yeroo bonaa ganama kanan argu biiftuu barii baatuudha.
Biyya kana keessatti namoonni baayyeen fayyaa isaaniif jecha bisikileetii oofuu.
Keessattuu ganama ganama bisikileetoonni heduun tartiiba qabatanii gara foddaatiin mullatu. Kanaafuu ganama keessa buna kiyya dhugaa aduu karaa foddaa galtu qaqqaammachaa ala ilaaluun natti tola.
Magaalaan Amistardaam waan baayyee qabdi. Garuu osoo qabaattee ykn osoo dabalameef kanan jedhu tulluu qofaadha. Magaalattiin dirree waan taateef tulluu arguun hin danda'amu. Kanaafu osoo tulluu qabaattee caalaa barreeddi jeedheen yaada.
Lageeniifi iddoowwan baayyee bareedanitu magaalattii keessa jira. Yoon biskileetaanis ta'e miilaan deemu lafa olka'aa tokkotti ba'ee naannoon magaalattii maal akka fakkaattu osoon argee natti tola.
Carraan kun osoo jiraatee miira gaarii naaf kenna jedheen yaada.
Amma garuu magaalaa keessa naanna'ee gaafan ilaalu, waan muraasa qofatu ija na seena. Mukaaf gamoowwan duuba maaltu akka jiru ilaaluun fedha.
Keessumaa magaalattii keessa yoo turtu miira ukkaamfamuutu sitti dhaga'ama.
Goodayyaa suuraa Amistardaam keessatti namoonni hedduun geejjibaaf biskileetatti fayyadamu
Naannoleen Amistardaam tokko tokko magaalaa dhalootakoo Harar waliin wal natti fakkaatu. Keessumaa manneen wayita Waraana Adduunyaa Tokkoffaa walitti siqanii ijaaraman fi daandiin keessa keessaa dhagaa soqamerraa ijaaraman, xiqqaatus Jagooliin na yaadachiisu.
Yeroon jalqaba dhufetti gara naannolee kunneenii yoon deemu baay'ee na dinqa ture. Kanaan ala magaalattii keessa naannolee biyya keenyaa ani beeku waliin wanti wal-fakkeessu hin jiru.
Amman Amistardaam keessa ture kana keessatti rakkoon guddaa na mudate jiraachuu baatus, jalqabarra namaafi biyyichaaf keessummaa waanan tureef walitti dhufeenya hawaasummaa uumuuf rakkadheen ture.
Kanaanis yaada biyyaaf maatii, akkasumas dhiibbaa barnootaa waliin dabaalamee natti ulfaatee ture. Ji'oota lamaafis hedduu rakkadheen ture. Kanaan ala galata Waaqaa amma hunduma baree wanti hunduu dansaa naaf ta'eera.
Haalan amma jiru keessatti osoon tasa ka'ee bakka tokko deemuu danda'ee, kanin deemu Harari. Kallattiidhaan gara Harar deemee Gamoo Jagool keessa naanna'aa kuduraawwan mi'aawoo qabdu san osoon nyaadhee natti tola.
''Maatii bulchuun mataan isaa siyaasa''
Egeree paartilee siyaasaa Oromoo - 'Diimokiraatiik fi Riippablikaan'
Ameerikaan hidhattoota al-Shabaab '60 galaafatte'
Hongeen 'waraana caalaa lammiilee Afgaan buqqisaa jira'
''Humna Oromoo keessaa fi alatti ni jabeessa''